सुरू भयाे लघुकथा प्रतियोगिताकाे नवौँ चरण, आमन्त्रित निर्णायकमा महेश प्रसाईं | साहित्यपोस्ट
साहित्यपोस्ट प्रकाशित ११ बैशाख २०७८ १९:३०
नवाैँ साताको घोस्ट राइटिङ् लघुकथा प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ । यो प्रतियोगिता साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ । पुनः बढेकाे काेराेना प्रकाेपलाई ध्यानमा राखेर याे साताकाे लागि काेराेना आतङ्कलाई विषय बनाइएको छ । चरणमा प्रतियोगी कथाकारहरूले काेराेनाले ल्याएकाे आतङ्क तथा जनजीवनमा पारेकाे असरलाई लघुकथाकाे कथानक बनाउनुपर्ने छ ।
लघुकथामा रुची भएका साहित्यकारहरुले काेराेना आतङ्कसँग सम्बन्धित आफ्ना लघुकथाहरुलाई तलको कमेन्ट बक्समा राख्नुपर्ने छ । तीमध्ये सर्वोत्कृष्ट तीन लघुकथाहरु छानिने छन् । हरेक साता छानिने ती उत्कृष्ट कथाहरुलाई आगामी वर्ष वर्षका उत्कृष्ट लघुकथाका रुपमा प्रकाशन गरिनेछ ।
नवाैँ साताका लागि प्रमुख निर्णायकमा वरिष्ठ साहित्यकार महेश प्रसाईं रहनुभएकाे छ । वि.स. २०१३ सालमा जन्मनु भएका प्रसाईं लामाे समयदेखि प्राध्यापन कर्मका साथै आख्यान लेखक, सम्पादन र खाेज तथा अनुसन्धानमूलक लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ । वि.स. २०२९ सालमा पहिलाेपटक रघुकथा रचना प्रकाशनमा ल्याउनुभएका उहाँका फूलैफूलका अलाप र अतिरिक्त स्वरहरू (लघुकथाकृति) प्रकाशित छन् । उहाँलाई लघुकथा लेखनमा याेगदानका लागि बाटुली खिलध्वज लघुकथा सम्मान (२०७६) समेत प्रदान गरिएकाे छ ।
त्यस्तै प्रसाईंकाे लघुकथासङ्ग्रह एउटा कथाकाे पुनर्जन्म गत वर्ष काेराेना आतङ्ककै बीचमा प्रकाशनमा आएकाे छ ।
ख) यसपटकको लघुकथाको विषय काेराेना आतङ्क रहेको छ । प्राप्त लघुकथाहरु शीर्षक फरक फरक भए पनि कथाले कुनै न कुनै रूपमा नयाँ वर्षले ल्याउने उमङ्गलाई छोएको हुनुपर्नेछ ।
छ) यो प्रतियोगिताको समय अहिलेदेखि सुरु भएर वैशाख १८ गते (शनिबार) राति ११ बजेर ५९ मिनेटसम्म कायम रहनेछ । त्यसपछि पोस्ट गरिएको कथालाई मान्यता दिइने छैन ।